स्यान्टियागोको फ्रेन्च मार्ग: सबैभन्दा रोचक स्टपहरू | यात्रा समाचार
स्यान्टियागोको फ्रेन्च मार्ग
लुइस मार्टिनो | | मार्गदर्शकहरू
क्यामिनो फ्रान्सिस डे स्यान्टियागो तीर्थयात्रीहरू द्वारा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ जेकबियन मार्ग। यो सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक परम्पराको साथ एक हो, किनकि यो पहिले नै वर्णन गरिएको छ 'कोडेक्स क्यालिस्टिनो', बाह्रौं शताब्दी मा मिति र जुन तीर्थयात्रा को बारे मा लेखिएको छ कि सबै को सबै भन्दा महत्वपूर्ण पदहरु को एक हो स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला.
क्यामिनो डि स्यान्टियागो फ्रान्सेसको अंश सान जुआन डी पाई डे पुर्टो, गलिक लोअर नाभरामा, जहाँ युरोपमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण जेकबियन मार्गहरू आइपुग्छन्। त्यसपछि पौराणिक कथाको लागि स्पेन प्रविष्ट गर्नुहोस् Rocesvalles पास र इबेरियन प्रायद्वीप मार्फत प्रेरितको शहरमा पुग्न सम्म यसको यात्रा जारी राख्दछ। यसलाई पार गरौं। यदि तपाईं हामीलाई पछ्याउने हिम्मत गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सुन्दर ऐतिहासिक शहरहरू, अद्भुत परिदृश्य र अविस्मरणीय यात्राको मजा लिनुहुनेछ।
1 क्यामिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्कस: यसको मुख्य स्टपहरू
1.1 एस्टेलला, नाभरेस रोमानेस्कको राजधानी
1.2 नेजेरा, क्यामिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सिसको अर्को आवश्यक स्टप
1.3 सान्टो डोमिंगो डे ला Calzada
1.4 Carrión de लॉस कोन्डिस
1.6 Villafranca डेल Bierzo, स्यान्टियागो को फ्रान्सेली मार्ग को गैलिशियन सीमा मा
1.8 राजाको फावडा
2 केमिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सिस गर्न कहिले यो राम्रो हुन्छ
क्यामिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्कस: यसको मुख्य स्टपहरू
हाम्रो यात्रा कार्यक्रममा हामी यस जेकबियन यात्रा कार्यक्रमका केही शहरहरूमा रोक्दछौं। तर ठूला ठूला क्यापिटलहरूमा होइन, जुन तपाईंलाई पहिले नै पर्याप्त भन्दा बढी थाहा हुनेछ, तर ती उत्कृष्ट स्मारकका साथ ती अन्य स्मारक शहरहरूमा। हिंड्न सुरु गरौं।
एस्टेलला, नाभरेस रोमानेस्कको राजधानी
ऐतिहासिक शहर जहाँ तिनीहरू अवस्थित छन्, एस्टेला मानिन्छ नावारिस रोमेनेसकको राजधानी। तपाईं पाम्प्लोना छोडेपछि त्यहाँ पुग्नुहुनेछ र हामी तपाईंलाई हेर्ने सल्लाह दिन्छौं नवारको राजाहरूको दरबार, जुन एक मात्र नागरिक रोमान्स्क निर्माण छ जुन सम्पूर्ण स्वायत्त समुदायमा रहन्छ। यो १२ औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो र यो एक राष्ट्रीय स्मारक हो।
यससँगै तपाईलाई पनि थाहा हुनुपर्दछ अदालत, XVIII को बारोक भवन; त्यो संक्रिस्टबलको हो, पुनर्जागरण, र गभर्नरको, जो यसको स्मारक सरलता को लागी खडा छ। तपाईंले कलको अवशेषहरू पनि भ्रमण गर्नुपर्नेछ नयाँ यहूदी क्वार्टर, जसमध्ये दुईवटा कमलहरू सहित एक धरहरा संरक्षित छ।
नवारको राजाहरूको दरबार
तर यदि एस्टेलाले केमिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सेसको शहरहरू बीच केहि देखाउँदछ भने, यो यसको कारणले हो। विशाल धार्मिक विरासत। यो चर्च जस्तै मिलेर बनेको छ सान पेड्रो डे ला रिया, राजसी हवाको; त्यो पवित्र चिहान, यसको प्रभावशाली गहिराइमा भडकिएको गोथिक पोर्टिकोको साथ; त्यो सानमिगुइलडेटुकुमान, यसको सुसमाचारको कभरको साथ; त्यो सान जुआन, यसको नियोक्लासिकल एफएड, वा प्यूको बासिलिका, २० औं शताब्दीमा पुनर्स्थापना गरियो।
लास जस्ता आयोजनाहरू पनि धार्मिक सम्पदामा आबद्ध छन् रिकोलिटा कन्सेपनिस्टहरू, यसको प्रभावशाली फ्याडेड र यसको साथ स्यान्टाक्लारा, सत्रौं शताब्दीमा निर्मित र यसमा तीन शानदार बारोक वेदबिन्दुहरू छन्।
नेजेरा, क्यामिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सिसको अर्को आवश्यक स्टप
तपाईं ला Rioja मा यस सानो शहर को ऐतिहासिक महत्व को एक विचार प्राप्त गर्नेछौं यदि हामी तपाईंलाई एकपटक को लागी, भनेर थियो भने Nájera-Pamplona को राजधानी को राजधानी, १० औं शताब्दीमा। शहरमा तपाईले सुन्दर भ्रमण गर्नुपर्नेछ सान्ता मारिया ला रियलको मठविशेष गरी यसको मन्दिर, शाही पेन्थेन सहित, र यसको भव्य नाइट्सको क्लोस्टर, जुन द्वारा पहुँच गरिएको छ कार्लोस म गेट तेजस्वी गथिक शैलीमा।
तपाईंले नाजेरामा पनि पुरानो अवशेषहरू हेर्नु पर्छ अल्काजार; को पवित्र क्रसको चर्च, एक पुनर्जागरण रत्न, र सान्ता एलेना को कन्भेन्ट, १ XNUMX औं शताब्दीमा निर्मित। फरक चरित्र छ ला रिओजाको बोटानिकल गार्डेनएक आश्चर्य, यदि तपाईं बोटहरू मन पराउनुहुन्छ।
यस शहरको क्यामिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सेसमा यति धेरै परम्परा छ कि योसँग एक छ पौराणिक कथा यससँग सम्बन्धित। भनिन्छ कि तीर्थयात्रीलाई शहरमा भएको हत्याको अभियोग लगाइएको थियो। आफ्नो निर्दोष प्रमाणित गर्न, सान्तो डोमिन्गोले गरे पहिले नै पकाइसकेको कुखुरा उडाउनुहोस् र प्लेटमा। त्यसैले भनाइ "सान्तो डोमिंगो डे ला कलजादा, जहाँ कुखुरा भुले पछि गाई".
केवल तपाइँको क्याथेड्रलजहाँ यी पक्षीहरू जहिले पनि जीवित छन्, यो तपाईंले भ्रमण गर्नु पर्ने स्थानहरू मध्ये एक हो। यसले रोमान्स्क र गोथिक शैलीहरू जोड्दछ, यद्यपि यसको फ्रीस्टेन्डिंग टावर बारोक छ। भित्र, तपाईंसँग एक अद्भुत प्लेटरेटिक कोयर्स छ, सन्त आफैको चिहान र दुई सुन्दर चेपलहरू, सान्ता टेरेसा र ला मग्दालेनाको।
सान्तो डोमिंगो डे ला Calzada को गिरजाघर
तपाईले सान्तो डोमिन्गो डे ला Calzada मा पनि देख्नु पर्छ सान फ्रान्सिस्को को कन्भेन्ट, Herrerian शैली र त्यो आज एक प्यारा डे टुरिस्मो, र हो सिस्टेरियन अबे, एक शानदार बारोक वेदपीसको साथ।
सिभिल आर्किटेक्चरको हिसाबले शहर सबैभन्दा ठूलो छ पर्खाल संलग्न कति ला लाओजामा संरक्षित छन् र असंख्य भव्य घरहरूको साथ। बारोक शैली हो टाउन हॉल, ला La Ensenada को Marquis को घर र त्यो फुर्सत। बरु, यो पवित्र ब्रदरहुड को घर पुनर्जागरण हो, जबकि को पुरानो कसाईहरू र कार्लोस V का सचिवको दरबार ती नियोक्लासिकल हुन्।
Carrión de लॉस कोन्डिस
को पालेन्सिया क्षेत्र को राजधानी फार्मल्याण्ड इतिहास भरि, यस सानो शहरमा अद्भुत रोमान्स्क भवनहरू छन्। ती मध्ये सान्ता मारिया डेल क्यामिनोको चर्च र त्यो सान्टियागो, कम्पोजेला कैथेड्रलको पेर्टिको डे ला ग्लोरियाको सम्झना दिलाउने फाउडसँग। तर पनि सान Zoilo को मठ, जसमा एक शानदार प्लेटेर्सिक क्लिस्टर छ, र त्यो स्यान्टाक्लारा, साथै बेतलेहेमको हाम्रो लेडीको चर्च, एक सुन्दर प्लेटरेसक वेदीपिसको साथ।
पहिले नै केमिनो डि स्यान्टियागो फ्रान्सिसको लियोनी भागमा तपाईं पुरानो ठाउँमा आइपुग्नुहुनेछ अस्टुरिका अगस्टा रोमन तपाईले देख्न सक्नुहुने सबै देखाउन तपाईलाई एक भन्दा बढी लेख चाहिन्छ।
तर, आवश्यक भ्रमणहरू छन् पुरानो पर्खाल चौथो शताब्दीबाट, पूर्ण रूपमा संरक्षित; को टाउन हॉल, अठारौं शताब्दीमा निर्मित र जसको घडी दुई घण्टा लुगा लगाएर घण्टा प्रहार गर्दछ मारागाटोस; को चर्चहरु सान बार्टोलोमी y सांता मार्टाRomanesque पहिलो र नियोक्लासिकल दोस्रो; को कन्भेन्टहरू सान फ्रान्सिस्को र सान्ती स्पिरियस र दर्शनीय प्रमुख सेमिनरी, हेरेरियन सम्झना संग क्लासिक भवन।
एस्टिस्कोल दरबार एस्टोर्गा
तर त्यहाँ एस्टोर्गामा दुई भवनहरू छन् जुन बाँकीबाट अलग छन्। पहिलो हो क्याथेड्रल, जसले गोथिक, रेनेसान्स र बारोक शैलीहरू जोड्दछ र सुन्दर Churrigueresque fçade छ। दोस्रो हो एपिस्कोपल दरबार, महान को एक अद्भुत काम एन्टोनियो गौडी जुन उसको सबै जस्तो स्टाइलमा अवर्गीकृत छ।
Villafranca डेल Bierzo, स्यान्टियागो को फ्रान्सेली मार्ग को गैलिशियन सीमा मा
हामी रोक्न सक्छौं पोन्फरडा यसको प्रभावशाली टेम्प्लर महल, यसको चर्चहरू र यसको गुम्बाको बारेमा तपाईंलाई बताउन। जहाँसम्म, हामीले अर्को कम ज्ञात तर समान सुन्दर शहरमा ध्यान केन्द्रित गर्न पार गर्न रुचाएका छौं।
Villafranca डेल Bierzo यो सबै हो ऐतिहासिक कलात्मक परिसर। यो जस्तो चमत्कारका कारणले हो सान्ता मारिया डे क्लूनी कलेजिएट चर्च, एक विशाल १ XNUMX औं शताब्दी भवन; को सान निकोलसको चर्च-कन्भेन्ट, जसको निर्माणको लागि एल एस्क्योरललाई एक मोडेलको रूपमा लिइएको थियो; को सान फ्रान्सिस्को को कन्भेन्ट, १ñ औं शताब्दीमा डोआ उर्राका द्वारा स्थापित, र विलाफ्रान्काको मार्क्विसको महल, १ud औं शताब्दीमा सामन्ती शैलीमा अघिल्लोमा बनाइएको।
पहिले नै क्यामिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सिसको गालिसियन भागमा, तपाईं सामोसमा आइपुग्नुहुनेछ, प्रान्तको अद्भुत वातावरणमा अवस्थित लुगा। यो हावी छ सिएरा डेल ओरिबियो र Piedrafita को पहाड। यसमा तपाईंले प्रभावशाली देख्नुपर्नेछ सेन्ट जुलियनको बेनेडिक्टिन अबे, जसको उत्पत्ति XNUMXth शताब्दीमा मिल्छ।
यो पुग्नु भन्दा पहिले यो अन्तिम महत्वको शहर हो स्यान्टियागो डे कम्ोस्टेला। यसमा तपाईले हेर्नु पर्छ विलार डि डोनासको रोमनस्क चर्च, १२ औं शताब्दीको मध्यमा निर्मित, र पाम्ब्रे महल, एक मध्ययुगीन गढीकरण यसको पुरातनता को बावजूद धेरै राम्रो संरक्षित।
केमिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सिस गर्न कहिले यो राम्रो हुन्छ
कुनै पनि तीर्थयात्रा मार्गहरू जस्तै, क्यामिनो फ्रान्सिस डे स्यान्टियागोलाई चिसो महिनाहरूमा सिफारिस गरिदैन। कम तापक्रम हिड्नको लागि राम्रो छैन र वर्षा seasonतुमा पनि मेल खान्छ।
न त ग्रीष्मकाल हिड्ने सल्लाह छ। उच्च तापक्रमले तपाईलाई बढी लगाउन वा दिनको मध्य घण्टामा रोक्न बाध्य तुल्याउँछ। थप रूपमा, तिनीहरू प्राय: व्यस्त मितिहरू हुन्, स्थान खोज्नका लागि सर्त तीर्थयात्रीहरूको होस्टल.
तसर्थ, फ्रेन्च मार्ग गर्नका लागि उत्तम समय हो वसन्त, यद्यपि तपाईं पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ शरद firstतु को पहिलो महिना.
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई केहि देख्यौं केमिनो डे स्यान्टियागो फ्रान्सिसमा सबैभन्दा रोचक स्टपहरू स्मारक दृश्य बाट। हामीले तपाईंलाई ठूला प्रान्तीय क्यापिटलहरू भन्दा कम चिनिएका शहरहरूको बारेमा बताउन कोशिश गरेका छौं। जे भए पनि, यो तीर्थयात्रा मार्ग गर्नु सधैं एक अनुभव हुन्छ समृद्ध र अद्भुत। सडकमा हिर्काएको जस्तो लाग्दैन?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » मार्गदर्शकहरू » स्यान्टियागोको फ्रेन्च मार्ग
नमस्ते! हामी स्पष्टीकरण दिन चाहन्छौं, भिलाफ्रान्का पछि चरणको अन्त्य - क्यालिस्टिनो कोडेक्सका अनुसार - ट्रायकास्टिला शहर हो। एक साइट जुन उल्लेख बाहेक, हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं। शुभकामना!
बुडापेस्ट मा Széchenyi स्पा